Map zuru ụwa ọnụ nke Ọganihu E-Azụmaahịa | Martech Zone
Map zuru ụwa ọnụ nke Ọganihu E-Azụmaahịa
Tọzdee, Eprel 24, 2014 Friday, April 25, 2014 Kelsey Cox
Ọ bụ ezie na anyị maara nke ọma etu e-commerce si eto ngwa ngwa na United States, na 4x ọnụego nke ụlọ ahịa, e nwere mba ndị ọzọ na-eme ka ọnụego ndị a dị ka ha na-agagharị na ọsọ ọsọ. Na China, azụmahịa e-commerce toro 51% na 2013 na amụma e-commerce na India na-amali elu site na $ 13B na 2013 ruo $ 70B site na 2020.
Ijikwa azụmahịa karịa eBay na Amazon jikọtara, ụlọ ọrụ China nke Alibaba na-enye akụrụngwa azụmaahịa China niile. N'ịga n'ihu ọha na NYSE n'afọ a, Alibaba ga-abụ otu n'ime ụlọ ọrụ 20 kachasị baa uru na United States. China na - ebute ụzọ n ’azụmaahịa e-commerce na - abawanye nke 57%, India na 29.5%, Brazil na 13%, na US na 5th na 12%. Na maapụ site na Ntụaka n'okpuru, lee ọnụ ọgụgụ e-commerce na-adọrọ mmasị, yana nyocha nke ahịa weebụ, ndị nleta kwa ọnwa, na ọnụego ntụgharị ha maka ụlọ ọrụ e-commerce nke ụwa. Kedu otu ahia gị si agbanwe agbanwe iji na-akwado ọganihu e-commerce?
Tags: Alibabaamazonẹphe -nọdue-azụmahịamapụwa
Kelsey Cox bụ Director nke nkwukọrịta na Nkebi nke ise, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke na-ahụ maka nyocha data, infographics, mkpọsa anya, na dijitalụ PR na Newport Beach, Calif. O nwere obi uto banyere ọdịnihu nke ọdịnaya dijitalụ, mgbasa ozi, ịme akara na ezigbo nhazi. Ọ na-enwekwa obi ụtọ n'ụsọ osimiri, nri, na biya biya.
Etu ị ga - esi soro Millennials + Omume Omume Omni na Channel ha